बिचित्र संसार – Page5– shubhabihani
Home / बिचित्र संसार (page 5)	बिचित्र संसार	चोट लाग्दा पनि नदुख्ने दुनियाकै एकमात्र बालिका, जसलाई न निद्रा लाग्छ, न त भोक
845 Views तस्वीरमा देखिएकी यी बालिका देख्नमा त अरु सामान्य बालबालिका झैँ लाग्छिन् । तर यिनी यस्तो रोगबाट पीडित छिन् जसका कारण उनलाई न त निद्रा लाग्छ, न त भोक नै लाग्छ ।
डाक्टरहरुका अनुसार ओलिवियामा क्रोमोजोम सिक्स डिलिसन डिसअर्डर भन्ने वंशाणुजन्य रोग छ । ओलिविया विश्वकै एकमात्र मानिस हुन् जसलाई यो रोगका तिनवटै लक्षण देखिएका छन्, भोक, निद्रा र पीडाको महसुस नहुनेे ।
यस्तो ढुंगा, जसलाई फुटाउँदा रगत निस्किन्छ
329 Views पृथ्वीमा कैयौँ प्रकारका ढुंगा पाइन्छन् । तर सबै पत्थरको एउटा साझा विशेषता भनेको यी सबै निर्जिव वस्तु हुन् ।
तर कुनै पत्थर टुक्रिँदा वा त्यसलाई काट्दा सजिव प्राणीको शरीरबाट जस्तै रगत निस्किएको सुन्नुभएको छ ? सायद छैन होला । तर यो साँचो हो की यो पत्थरलाई फुटाउँदा केवल रगत निस्किने मात्र होइन की यो पत्थरको मासु समेत निकै महंगोमा बिक्रि भैरहेको छ ।
चिली तथा पेरुको समुद्री किनाराहरुमा यस्तो ढुंगा पाइन्छ । यो पथ्थरलाई एथगचब ऋजष्भिलकष्क नामले चिनिन्छ । जब यो पत्थरलाई फोडिन्छ तब यसभित्रबाट रगत निस्किन थाल्दछ । यो पत्थरभित्र मासु पनि हुन्छ । बाहिर निकै कडा देखिने यो पत्थर भित्र निकै नरम हुन्छ ।
समुद्रको गहिराइसम्मै पुगेर यो पत्थरको खोजी गर्दछन् मानिसहरु । कारण, यो पत्थरभित्रको मासु निकै महंगोमा बिक्रि हुन्छ दुनियाका विभिन्न देशमा । यो ढुंगाको मासु काँचै खान मन पराइन्छ ।
अाखिर ढुंगाबाट रगत आउन र ढुंगाभित्र मासु हुन सम्भव छ त ? कुनैपनि हालतमा छैन । वास्तवमा यो निर्जिव ढुंगा नभै एउटा सामुदि्रक जिव हो ।
जसले स्वास पनि फेर्दछ र खाना पनि खान्छ । यसले आफ्नो लिंग पनि बदल्छ र बच्चा पनि जन्माउँछ । तर यो देख्दा हुबहु ढुंगाजस्तै देखिन्छ । त्यसैले यो रगत आउने पत्थरको नामले चिनिन्छ ।
२०७३ भदौ १० गते १०:१० मा प्रकाशित
घरमा पाइने माउसुली बिएमड्ब्लू कारभन्दा महंगो ! जान्‍नुस कसरी
2,133 Views एजेन्सी/भाद्र ८ , काठमाडौं । हामी प्राय आफ्नो घरको भित्तामा माउसुली देख्‍ने वित्तिक्कै भगाउनेतिर सोच्छौ। तर हामीलाई थाहा छ की हामरो घरमा पाइने माउसुली कत्ति महंगो छ भनेर ? यसको मूल्य बिएमड्ब्लू कारभन्दा महंगो छ। विश्व बजारमा यसको मूल्य करीब ६३ लाख ९७ हजार ६ सय २० रुपैँयाँ बढी रहेको छ। यो माउसुली विशेषगरी नेपाल र भारतको जंगलमा पाइने गर्दछन्। यस्तै नेपाल-भारत सीमामा यसको अवैध तस्करी हुने गरेको छ। तस्करीका क्रममा धेरै तस्करीहरु समातिएका पनि छन्।
तर तपाई सोच्दैहुनुहुन्छ होला यसको फाइदा के हुन्छ। यसलाई किन यति धेरै मूल्यमा तस्करहरुले बिक्री गर्छन? किनकी माउसुलीलाई बिरामीको परम्परागत उपचारको औषधि बनाउन प्रयोग गर्ने गरिन्छ। खासगरी डायबेटीज, एड्स, क्यान्सरलगायतका रोगमा माउसुलीले अचुक रुपमा औषधिको काम गर्दछ। यही कारण यसको माग विश्वभर रहँदै आएको छ। विशेष गरी चीनमा एक परम्परागत बजारमा यसको माग निक्कै धेरै छ। यही कारण यसलाई विदेश पठाउन तस्करहरु सक्रिय रहेका हुन्छन्।
यसका साथै नेपालर भारतबाहेक माउसुली इन्डोनेसिया, बंगलादेश तथा फिलिपिन्समा पाइने गरिन्छ। तर यसको मात्रा अब नेपाल -भारतको तुलनामा अन्य देशमा घट्दै गइरहेको छ। जंगलको तीव्र फडानी र जनसंख्या वृद्धिका कारण यसको लोप र तस्करी पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। यसको तस्करी हुनबाट बचाउन अहिलेसम्म कुनै पनि देशमा सतर्कता अपनाइएको पाइँदैन। (को सहयोगमा)
बाँदरविरुद्ध प्रशासनमा उजुरी
147 Views भाद्र ७, २०७३- कुन्तादेवी ३ का गंगाराम तामाङ केही दिनअघि मकै भाँचेर डोकामा राखी बारीबाट घर फर्किंदै थिए । उनलाई बाटामा बाँदरले खुट्टामै समातेर लडायो र चिथोर्न र टोक्न खोज्यो । बल्लबल्ल छिमेकी भाइले देखेपछि लखेटे ।
कुन्तादेवी ४ का मनकुमारी तामाङले ५ पाथी मकैको बीउ छरेकी थिइन् । समयमा पानी परेर लहलहाउँदै आएको मकैबाट यसपालि निकै आशा गरेकी थिइन् । पाक्न लागेको मकैबारीमा एक दिन बाँदरको हुलै पसेछ । बजारबाट फर्किएर बारीमा पुग्दा एक घोगा पनि मकै देखिनन् । उनी बारीको बीचैमा बसेर ग्वाँ–ग्वाँ रोइन् ।
बाँदरको सास्तीबाट हैरान भएका कुन्तादेवी र ज्यामिरेका दर्जनभन्दा बढी किसान आइतबार जिल्ला प्रशासनमा डेलिगेसन आए । ‘कि त भोकले मान्छे मर्नुपर्‍यो, कि त बाँदर मर्नुपर्‍यो । दुईमा एक त हुनैपर्ने भयो ।’ डेलिगेसन लिएर आएकी हेमकुमारी तामाङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकदेव अधिकारीलाई भनिन्, ‘दुवैलाई बचाउने हो भने राज्यले किसानको क्षतिपूर्ति दिनुपर्‍यो ।’
केही वर्ष अघिसम्म बाँदर कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न दुई घण्टाको बाटो लगाएर फागुनेटार पुग्ने गाउँलेहरू अहिले आफ्नै गाउँमा आएका बाँदरबाट हैरान छन् । पहिले एक–दुईवटा मात्र देखिएका राता बाँदर आजकाल कम्तीमा पनि ५ सयदेखि १ हजारको हुलमा आउने गरेको ज्यामिरेका दानबहादुर बानियाँले बताए ।
‘बाँदरकै दु:खले गर्दा आफ्नो बारी अधियाँ कमाउन दिएँ,’ बानियाँले भने, ‘हिजोआज अधियाँ गर्नेकहाँ अन्न लिन जाँदा त बाँदरले खाएर अन्नै छैन भनेर रित्तो पो फर्काउँछन् ।’ घर भित्रैबाट अन्नबाली र फलफूल लान थालेपछि किसानहरू यसलाई स्थायी रूपमा धपाउने वैकल्पिक उपायको खोजीमा लागेका हुन् । ढुंगा र फुसको छाना उक्काएर बाँदर घरभित्रै पस्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । मान्छेलाई आक्रमण गर्ने डर बढेपछि झनै यसको नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको हो । प्रजिअ अधिकारीले बाँदर मार्न अनुमति दिन नमिल्ने बताए । ‘बाँदरविज्ञसँग सल्लाह गरेर केही न्यूनीकरण गर्न सकिएला,’ उनले भने, ‘यसको नियन्त्रणको जिम्मेवारी वन कार्यालयको हो ।’
निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा हो भने किसानको क्षति भएको बाली सम्बन्धित क्षेत्रले दिनुपर्ने प्रावधान छ । वन ऐनअनुसार बाँदर बढी बस्ने सामुदायिक वनहरूले यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको निमित्त वन अधिकृत खिलानाथ दाहालले बताए । तर वन समूहसँग क्षतिपूर्ति दिने हैसियत नभएपछि बाँदर नियन्त्रण अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ । दुई वर्षअघि रामपुरका किसानहरूले समेत तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई बाँदर नियन्त्रणका लागि बन्दुक चलाउन दिनुपर्ने भन्दै लिखित निवेदन बुझाएका थिए । पटक–पटक प्रहरी र प्रशासनमा उजुरी र गुनासो परे पनि यसलाई गम्भीर रूपमा नलिइएको किसानको गुनासो छ ।
सरकारी अधिकारी भन्छन्ः अब महिलालाई १४ सेकेण्डसम्म घुर्नेलाई मुद्दा
269 Views विचरा अभागी पुरुषहरु अब कुनै महिलालाई १४ सेकेण्डसम्म पनि घुरेर हेर्न नपाउने भएका छन् । आधा मिनेटको आधा समयसम्म महिलालाई घुरेमा पनि उनीहरुमाथि मुद्दा चल्न सक्नेछ र जेलको हावा खानुपर्ने हुनसक्छ ।
चिन्ता नलिनुस् यो नियम हाम्रो देशमा भने होइन । भारतको केरलाका एक वरिष्ठ अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । अन्तशुल्क आयुक्त ऋषिराज सिंहका अनुसार यदि केरलामा कुनैपनि पुरुषले महिलालाई १४ सेकेण्ड भन्दा धेरै समयसम्म घुरेको पाइएमा उस विरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन सक्नेेछ ।
कोच्चीमा चार्टड अकाउन्टेन्टहरुको एक समूहलाई महिला सुरक्षाको विषयमा प्रवचन दिएको बेला सिंहले यस्तो बताएका छन् । साथै उनले महिलाहरुले आत्म सुरक्षाका लागि मार्सल आर्ट सिक्नुपर्ने पनि बताए ।
वरिष्ठ अधिकारीको यस्तो भनाइको तिव्र आलोचना भएको छ । उच्च अदालतका एक वकिलले यसरी १४ सेकेण्ड महिलालाई घुर्दैमा कसैमाथि मुद्दा हाल्ने कानून नै नभएको हुँदा अधिकारीको भनाइ बेतुकको रहेको बताएका छन् । केरल सरकारका एक मन्त्रीले पनि सिंहको भनाइको आलोचना गरेका छन् ।
पत्रकारले भैँसीको अन्तरवार्ता लिए पछि – – – – – (भिडियो सहित)
708 Views यो रिपोर्ट टेलिभिजनमा प्रशारण हुँदा स्टुडियोमा रहने पत्रकार त मुस्कुराए नै हेर्नेहरु पनि पेट मिचीमिची हाँस्नुको विकल्प थिएन ।
पाकिस्तानी पत्रकार अमीन हाफिज अहिले इन्टरनेटमा निकै चर्चामा छन् । उनी चर्चामा आउनुको खास कारण छ । वास्तवमा उनले पत्रकारिता क्षेत्रमा यस्तो कृत्य गरेका छन् जो अहिलेसम्म कुनैपनि माइकालाल पत्रकारले गर्न सकेको थिएन ।
पाकिस्तानी टेलिभिजन जिओ टिभीका यी संवाददाताले भैँसीको अन्तर्वाता लिएर किर्तिमानी काम गरेका छन् । उनले भैँसीसँग अन्तरवार्ता लिँदा आफुले प्रश्नमात्र गरेनन् प्रश्नमा भैँसीले दिने मौन उत्तरलाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गरेर झनै रोचक बनाएका छन् ।
टेलिभिजनमा लाहोर सहरमा मानिसलाई सडक पार गर्नका लागि बनाइउका आकासे पुलहरुमा मानिस भन्दा धेरै जनावरहरु आवतजावत गर्ने गरेको विषयमा हाफिजले एक रोचक रिपोर्ट तयार पारेका छन् ।
सुरक्षित रुपमा सडक पार गर्नका लागि बनाइएका आकाशे पुलहरु पैदल यात्रुले प्रयोग कम गर्ने गरेको र असुरक्षित रुपमा बाटो काट्ने गरेको तर गाइभैँसीले भने आकाशे पुलका सिँढी समेत चढेर पुल पार गर्ने गरेको सन्दर्भलाई जोड्दै उनले आकाशे पुल पार गरेको भैँसीको अगाडि गएर माइक तेर्साउँछन् र सोध्छन्, ई आकाशे पुलको सिँढी चढ्न सजिलो लाग्यो कि गाह्रो ?
जवाफमा भैँसी बाँ…. गर्छ । तर उसको त्यो आवाजलाई पत्रकारले अनुवाद गर्दछन् । सिँढी चढ्नु तथा ओर्लनु जनावरका लागि सजिलो काम नभएको भनेर भैँसीले भन्न चाहेको उनी बताउँछन् ।
यो रिपोर्ट टेलिभिजनमा प्रशारण हुँदा स्टुडियोमा रहने पत्रकार त मुस्कुराए नै हेर्नेहरु पनि पेट मिचीमिची हाँस्नुको विकल्प थिएन ।
437 Views मानिसको गर्भावस्था भनेको अधिकतम ९ महिनाकेा हुन्छ । तर चीनमा एक महिला भने १७ महिनादेखि गर्भवती छिन् ।
लगातार ५८ घण्टा चुम्बन गरेर विश्व किर्तिमान
315 Views प्रेम प्रकट गर्ने अनुपम नमूना हो चुम्बन । तर कोही जोडीले लगातार ५८ घण्टा चुम्बन गर्न सक्ला ? हो, थाइल्याण्डमा एक जोडीले लगातार ५८ घण्टा भन्दा बढि समयसम्म चुम्बन गरेर विश्वकिर्तिमान कायम गरेका छन् ।
थाई जोडी एक्काचई र लकसाना तिरानारातले ५८ घण्टा ३५ मिनेट ५८ सेकेण्डसम्म लगातार चुम्बन गरेका हुन् ।
३ वर्ष पहिले उनीहरुले राखेको यो किर्तिमान अहिलेसम्म कसैले तोड्न सकेको छैन । भ्यालेन्टाइन डे का अवससरमा भएको किसाथनमा उनीहरुले गरेको यो किर्तिमानी कामका लागि पुरस्कार वापत नगद र हिराका औँठी लगायतका पुरस्कार पाएका थिए ।
561 Views यो दुनियामा के के मात्र सुन्नु पर्छ हँ ? भारतमा एक ९० वर्षे महिला मृत घोषित गरिएको १० घण्टापछि ब्युँझिएकी छिन् ।
यतिमात्र त ठिकै थियो । तर ती महिलाले आफुले मरेर यमराजसँग भेटघाट गरेर फर्किएको भनेपछि सबै छक्क परेका छन् ।
घाटमा ठूलै हंगामा भयो । मानिसहरु थरथरी काँप्न थाले । मरेको मानिस कसरी बाँचेर आयो ? भनेर सबै छक्क परे । कैलादेवीलाई हेर्नेको घुइँचो लाग्यो ।
अाखिर मरिसकेको मानिस कसरी बाँच्न सम्भव भयो ? मानिसहरुले कैलादेवीलाई अनेक खालका प्रश्न गरे । कैलाले पनि सबैलाई छक्क पार्ने जवाफ दिइन् । कैलाका अनुसार मरिसकेकी उनलाई यमराज आफैले पुनः धर्तीमा ल्याएर ज्यूँदो पारेर छाडिदिएका हुन् । आफुलाई धर्तीमा छाड्न यमराज स्वयं आएको उनको दाबी छ ।
आखिर ती वृद्धाको उपचारका लागि घरमै आएका डाक्टरले नै मृत घोषित गरेर जलाउनका लागि घाटमा लगिएकी कैला देवी घाटमा एक्कासी कसरी ब्युँझिइन् र उनले दाबी गरेका परलोकका कुरा कत्तिको सत्य हुन् ? त्यो चाहीँ रहस्यको गर्भमै छ ।
बफादारी कुकुर, मरिसकेको मालिकलाई ८ महिनादेखि अस्पताल बाहिर कुर्दै
285 Views कुकुरलाई निकै बफादार प्राणी मानिन्छ । जब कुनै कुकरले एकपटक आफ्नो मालिक वा आफुलाई पाल्ने मान्छेलाई माया गर्दछ तब भलै उसको मालिकले उसलाई किन नछाडोस् तर उसले पछ्याइरहन्छ ।
हाचिको डग नामक एउटा विदेशी फिल्म हेर्नुभएकै होला । त्यहाँ नाट्यशालाभित्र छिरेर भित्रै हृदयाघात भएर मरेको आफ्नो मालिकलाई वर्षौँसम्म उसको कुकुरले नाट्यशालाको बाहिर पर्खिरहन्छ । मालिक बाहिर आउने आशामा कुर्दाकुर्दा अन्तिममा हिउँले कठ्यांगि्रएर त्यो कुकुर मर्दछ । यस्तै घटना ब्राजिलमा घटेको छ ।
ब्राजिलको फ्लारियानपोलिस सहरस्थित रुथ कारडोसो नामक अस्पताल बाहिर एउटा कुकुर पछिल्लो ८ महिनादेखि कुरेर बसिरहेको छ ।
उक्त अस्पतालमा उसको मालिकलाई उपचारका लागि लगिएको थियो र उपचारका क्रममा उनको निधन भएको थियो । मालिकलाई अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याउँदा उक्त कुकुर एम्बुलेन्सको पछि पछि कुँदेर अस्पतालसम्म आएको थियो ।
कुकुरको यस्तो बफादारी देखेर अस्पतालका स्टाफ तथा त्यहाँ आउने सबै मानिसहरु भावविह्वल बनिरहेका छन् । यो कुकुरलाई कतिले आफ्नो घरमा लगेर पाल्न चाहे । तर उसलाई जहाँ लगेपछि फर्केर अस्पतालमै आउने गरेको छ । अहिले अस्पतालका स्टाफहरुले नै उसको पालनपोषण गर्ने गरेका छन् ।